တောမီး ငြှိမ်းသတ်နိုင်ဖို့ သြစတြေးလျကို ဂျပန်က တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ စေလွှတ်မယ် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင္း နိုင်ငံတကာသတင်း တောမီး ငြှိမ်းသတ်နိုင်ဖို့ သြစတြေးလျကို ဂျပန်က တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ စေလွှတ်မယ်
Firefighters createaback burn ahead ofafire front in the New South Wales town of Jerrawangala on January 1, 2020. - A major operation to reach thousands of people stranded in fire-ravaged seaside towns was under way in Australia on January 1 after deadly bushfires ripped through popular tourist spots and rural areas leaving at least eight people dead. (Photo by PETER PARKS / AFP) (Photo by PETER PARKS/AFP via Getty Images)
တောမီး ငြှိမ်းသတ်နိုင်ဖို့ သြစတြေးလျကို ဂျပန်က တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ စေလွှတ်မယ်
သြစတြေးလျတောမီး ငြှိမ်းသတ်ဖို့ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့တွေ စေလွှတ်ပေးသွားမယ်လို့ ဂျပန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
တောမီးငြှိမ်းသတ်ရာမှာ ကူညီပေးဖို့ သြစတြေးလျ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးက အကူအညီ တောင်းဆိုခဲ့ပြီးနောက် ဂျပန်ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ စေလွှတ်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သြစတြေးလျတောမီး လောင်ကျွမ်းမှုတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ဖို့ အရေးပေါ် ပစ္စည်းတွေ ပေးပို့သွားဖို့ ဂျပန်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေ ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ ဂျပန်အစိုးရအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
သှစတှေးလဟွာ ပှီးခဲ့တဲ့ စကတြငဘြာလကတညြးက လောငကြွှမြးနတေဲ့ တောမီးငှှိမြးသတနြိုငဖြို့ အခကအြခဲတှေ ရငဆြိုငနြရပှေီး လကရြှိအခွိနအြထိ တောမီးလောငကြွှမြးမှုကို အပှီးသတြ မငှှိမြးသတနြိုငသြေးပါဘူး။ အပူခွိနမြှင့မြားမှုအပှငြ လပှငြေးတိုကခြိုကမြှုတှကှေောင့ြ တောမီးလောငကြွှမြးမှုက ပိုမိုဆိုးရှားနခေဲ့ပှီး လူ ၃၀ နီးပါး သဆေုံးခဲ့သလို တိရဈဆာနအြကောငရြအတှေကြ ၁ ဘီလီယံ နီးပါး သဆေုံးခဲ့ရတယလြို့ သှစတှေးလွ အာဏာပိုငတြှကေ ပှောပါတယြ။
တောမီး ငွှိမျးသတျနိုငျဖို့ သွစတွေးလကြို ဂပြနျက တပျဖှဲ့ဝငျတှေ စလှေှတျမယျ
သြစတြေးလျဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလကတည်းက လောင်ကျွမ်းနေတဲ့ တောမီးငြှိမ်းသတ်နိုင်ဖို့ အခက်အခဲတွေ ရင်ဆိုင်နေရပြီး လက်ရှိအချိန်အထိ တောမီးလောင်ကျွမ်းမှုကို အပြီးသတ် မငြှိမ်းသတ်နိုင်သေးပါဘူး။ အပူချိန်မြင့်မားမှုအပြင် လေပြင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် တောမီးလောင်ကျွမ်းမှုက ပိုမိုဆိုးရွားနေခဲ့ပြီး လူ ၃၀ နီးပါး သေဆုံးခဲ့သလို တိရစ္ဆာန်အကောင်ရေအတွက် ၁ ဘီလီယံ နီးပါး သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ သြစတြေးလျ အာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။
Previous articleမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဘာတန်ဂတ်စ် ပြည်နယ်ကို ဘေးဒဏ်သင့် အခြေနေအဖြစ် ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရ ကြေညာ
Next articleရှာကွီရီအတွက် ရိုးမားရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုကို ပယ်ချလိုက်တဲ့ လီဗာပူး